ခလေးငယ်ရဲ့ တေးသံလား . . .ခလေးငယ်ရဲ့ ငိုကြွေးသံလား . .
သူတို့ရဲ့ရှေ့ရေး ...ပြုံးပန်းဆင်နှိင်ပါ့မလား. . .
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 6/24/20080အကြံပြုခြင်း
အာဏာရူးကြီး မှူးကြီးသန်းရွှေ’ ဟု ရေးသားသူ ကဗျာဆရာကို ရုံးထုတ်ပြန်
စစ်အစိုးရတွင်း အပြောင်းအရွှေ့များ နောက်ကွယ်တွင် ဘာတွေရှိသလဲ
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 24 2008 18:22 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ မြန်မာစစ်အစိုးရသည် အဓိကကျသော တပ်မတော်အရာရှိ အများအပြားကို အစဉ်အလာ မရှိဘဲ ရုတ်တရက် အပြောင်းအရွှေ့ များ ပြုလုပ်လိုက်ပြီး အရာရှိငယ်များကိုလည်း စစ်တိုင်းမှူး ရာထူး နေရာများတွင် တိုးမြှင့်ခန့်ထားလိုက်သည်။
အနည်းဆုံး ငယ်ရွယ်သော တပ်မတော်အရာရှိ ၄ ဦးကို စစ်တိုင်းမှူး ရာထူးသို့ တိုးမြှင့် ခန့်ထားလိုက်သည့် အပြောင်းအလဲသည် ထူးခြားမှုရှိပြီး၊ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည်ဟု ကြေညာထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ရည်စူးပြုလုပ်ပုံ ရသည်ဟု အကဲခတ်များက ထင်မြင်ယူဆကြသည်။
လျှို့ဝှက် သိပ်သည်းလှသော စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ဤသို့ ရာထူး အပြောင်းအလဲများကို အခါအားလျော်စွာ ပြုလုပ်လေ့ ရှိသော်လည်း ဤသို့ အရာရှိ ၂ဝဝ ခန့်ကို အပြောင်းအလဲ လုပ်လိုက်ခြင်းမှာမူ သက္ကရာဇ် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်အလွန် ကာလအတွက် ရည်ရွယ် ပြုလုပ်ပုံရသည်ဟု တရုတ်နိုင်ငံ အခြေစိုက် မြန်မာလူမျိုး စစ်ရေး အကဲခတ်တဦးက ပြောကြားသည်။
“ဒီတခါအနည်းဆုံး ၂ဝဝ လောက် အပြောင်းအရွှေ့ လုပ်တာဆိုတော့ တကယ် ထူးခြားတယ်ဗျ” ဟု တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ်အခြေစိုက် အကဲခတ် တဦး ဖြစ်သည့် ဦးမြမောင်က ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ အနေဖြင့် သူ၏ အာဏာချုပ်ကိုင်သော ယန္တရားတွင် ‘သွေးသစ်’ လောင်းပေးသည် ဆိုသည်မှာ သေချာသော်လည်း ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပေါ်ပေါက်လာမည့် အစိုးရသစ် ပုံစံတရပ်အတွက် ရည်စူးပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်သည့်သဘော ပိုမိုသက်ရောက်သည်။ ဤ ရွေးကောက်ပွဲသည် စစ်အစိုးရ ကြေညာထားသည့် ဒီမိုကရေစီသို့ သွားရာ အဆင့် ၇ ဆင့်ပါ လမ်းပြမြေပုံတွင် အဆင့် ၅ ဖြစ်သည်။
“ဒါ သူ့တပ်တွင်း မျိုးဆက်သစ်အတွက် စစ်အစိုးရ လမ်းဖွင့်ပေးတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရမှာ တခြား အစီအစဉ်တွေလည်း ရှိနိုင်သေးတယ်။ အခုဟာက ပြင်ဆင်နေတဲ့ဟာ ဖြစ်နိုင်တယ်” ဟု ဦးမြမောင်က ဆက်သည်။
အဓိကကျသော စစ်တိုင်းမှူး ၄ ဦးကို ကာကွယ်ရေး အထူးစစ်ဆင်ရေးမှူး (ကစထ) ရာထူးနေရာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် စစ်အစိုးရက အမိန့်ပေးထားကြောင်း စစ်တပ်သတင်း ရပ်ကွက်များက ပြောသည်။
ကထစမှူးဟောင်း ၄ ဦးကို အငြိမ်းစား ယူခွင့်ပြုလိုက်ပြီး သူတို့နေရာတွင် အဆိုပါ အသစ် ပြောင်းရွှေ့လာမည့် အရာရှိများက တာဝန်ယူသွားမည် ဖြစ်သည်။ တြိဂံတိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း၊ တောင်ပိုင်းတိုင်း၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်းနှင့် ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူးများကို ရာထူး တိုးမြှင့်ပေးလိုက်သည်။
“စစ်အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားအတွင်းမှာ သွေးသစ်လောင်းတယ် ဆိုပေမဲ့ ကစထမှူးတွေကိုပါ ပြောင်းပစ်လိုက်တာ ကတော့ အတော် ထူးခြားတယ်” ဟု ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာ့အရေး အကဲခတ် ဦးဝင်းမင်းက ပြောကြားလိုက်ပါသည်။
ဤအပြောင်းအရွှေ့များသည် စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းအရာရှိကြီး ၂ ဦးဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးတို့ အကြား အာဏာ လွန်ဆွဲပွဲ၏ ရလဒ် ဖြစ်နိုင်ကြောင်းလည်း သူက ဆက်ပြောသည်။
“အခု အပြောင်းအရွှေ့တွေက သန်းရွှေရဲ့ အာဏာကို ပိုပြီး ခိုင်မြဲသွားစေလိမ့်မယ်။ အဓိက မဟာဗျူဟာကျတဲ့ ရာထူးတွေကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ အရာရှိအများစုက သူ့သစ္စာတော်ခံတွေလေ” ဟု ဦးဝင်းမင်းက ဆိုသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ စစ်အစိုးရ၏ ဤအပြောင်းအလဲများသည် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲသစ်အပြီး ပေါ်ပေါက်လာမည့် အစိုးရ ပုံစံသစ်တရပ် အတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မဟုတ်ဟုမူ မဆိုနိုင်ကြောင်းလည်း ဦးဝင်းမင်းက ဆက်ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီသို့ သွားရာ လမ်းပြမြေပုံအရ ဆိုလျှင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ အတည်ပြုပြီးလျှင် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရ မည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲပြီးလျှင် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရပါတီက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနှင့်အညီ တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်သွားရမည် ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲသစ်ကို ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပမည်ဟု စစ်အစိုးရက ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ကြေညာခဲ့သော်လည်း ရက် အတိအကျကိုမူ သတ်မှတ်ဖော်ပြခြင်း မရှိသေးပါ။
ဝေဖန်သူများကမူ စစ်အစိုးရ၏ လမ်းပြမြေပုံကို ဝေဖန် တိုက်ခိုက်လိုက်ကြပြီး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ မူကြမ်းမှာလည်း အားလုံး ပါဝင်မှုမရှိဘဲ ရေးဆွဲ ထားခြင်း ဖြစ်ပြီး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အတည်ပြုသည့် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပရာတွင်လည်း မဲလိမ်မှုများ ရှိခဲ့သည်ဟု ဝေဖန် ပြောဆိုကြသည်။
“ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပေါ်လာမယ့် အုပ်ချုပ်မှုအသစ်အတွက် စစ်အစိုးရ တဖြေးဖြေး ပြင်နေပုံရတယ်” ဟု ဦးဝင်းမင်းက ပြောသည်။
တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်အခြေစိုက် အကဲခတ် ဦးမြမောင်ကမူ စစ်အစိုးရသည် တိုက်ရိုက် စစ်အာဏာရှင်စနစ်မှ အရပ်သား အာဏာရှင်စနစ် ပုံစံသစ်တရပ်သို့ ပြောင်းလဲနေခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဤပုံစံကို သူ့ရှေ့မှ အာဏာရယူခဲ့သူ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်းက ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၈ ခုနှစ်အထိ ထိရောက်စွာ ကျင့်သုံး အကောင်အထည် ဖော်ခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောဆိုသည်။
“ဒါကြောင့် စစ်အစိုးရက အဓိကကျတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကို အနားပေးပြီး အရပ်သားဝန်ကြီး အဖွဲ့တဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်း၊ ဒီဝန်ကြီးအဖွဲ့ကမှ တိုင်းပြည်ကို တကယ် အုပ်ချုပ်သွားမယ့် ပုံရှိတယ်” ဟု ဦးမြမောင်က ဆိုသည်။
သို့သော် ဝါရင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကဲခတ်တဦးဖြစ်သည့် ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းကမူ ယခုအချိန်တွင် မည်သည့် ကောက်ချက်မျိုးကိုမဆို ချမှတ်ရန်မှာ စောလွန်းနေသေးကြောင်းနှင့် စစ်အစိုးရ လှမ်းမည့် နောက်ခြေလှမ်းကို စောင့်ကြည့်ရန် လိုသေးကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။
“ဒီအပြောင်းအရွှေ့တွေဟာ ထူးခြားတယ် ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေးမှာ စစ်အစိုးရရဲ့နောက် ခြေလှမ်းကို စောင့်မကြည့်ဘဲ ကောက်ချက်ချတာတော့ စောလွန်းတယ်” ဟု ဦးဘိုဘိုကျော်ငြိမ်းက ပြောကြားလိုက်ပါသည်။
လွတ်လပ်ရေး ခေါင်းဆောင်ကြီးများ၏ စာပေလက်ရာများ အထက်တန်း သင်ရိုးညွှန်းတမ်းမှဖြုတ်
ကိုစိုး ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၀၈
စစ်အစိုးရက ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ခု ပညာသင်နှစ်အတွက် အခြေခံပညာ အထက်တန်းအဆင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အသစ် ပြင်ဆင်၍ ပြောင်းလဲ ပြဌာန်းရာတွင် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ ဆရာကြီး သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း တို့နှင့် သက်ဆိုင်သော စာပေများကို ဖြူတ်ပယ် ပြဌာန်းထားသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း.............. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ............
မြန်မာအမျိုးသား ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၊ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် သမိုင်း ကြောင်းနှင့် စာပေများသည် နောက်မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ သိသင့်သိထိုက်ပြီး အတုယူရမည်ဖြစ်သော ကြောင့် သင်ရိုးညွှန်းတန်းမှ မဖြုတ်ပယ်သင့်ကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာနိုင်ငံသား ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက် ပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ပြုလုပ်ပေးနေသော ဒေါက်တာ သိန်းလွင်က ပြောသည်။
“ပညာရေးက သမိုင်းကြောင်းနဲ့ဆက်စပ်နေတာဆိုတော့၊ လူငယ်တွေသိသင့်သိထိုက်တာ၊ အနာဂတ်မှာ သင်ခန်း စာယူရမှာ တွေကို ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာ ထည့်ရမှာပဲ၊ အခုအချိန်အထိ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတို့ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း တို့ဆိုတာ မြန်မာအမျိုးသားရေးခေါင်းဆောင်တွေပဲ၊ သူတို့ရဲ့ သမိုင်းတွေ၊ သူတို့ရဲ့အမြင်တွေ ကို ကျောင်းသားတွေ သိထိုက်တယ်၊ ဒါတွေကို ကျောင်းသင်ခန်းစာမှာ သင်ထိုက်တယ်”ဟု ဒေါက်တာ သိန်းလွင်က ပြောသည်။
ယခု သင်ကြားရမည့် ၁၀ တန်း သင်ရိုးသစ် တွင် ယခင် သင်ရိုးဟောင်း ပင်ရင်းစကားပြေမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ “ပြည်သူ့ ညီလာခံ”အမည်ရှိ မိန့်ခွန်းကောက်နုတ်ချက် စကားပြေအပါအဝင် ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၏ “လူကြီးနှင့် လူငယ်” စကားပြေနှင့် မြန်မာကဗျာလက်ရွေးစဉ်မှ “သပြေနုချိန်”ကဗျာတို့ကို ဖြုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်းသည်။
ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့၏စာပေနှင့် အတွေးအခေါ်တို့သည် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင် ခြိမ်းခြောက်နေသောကြောင့် စစ်အစိုးရက ကျောင်းသင်ခန်းစာမှ ဖြုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် စာရေး ဆရာ ဇင်လင်းကလည်း ပြောကြားသည်။
“သူတို့ရေးခဲ့တဲ့စာတွေ၊ ပြောခဲ့ဟောခဲ့တဲ့ စကားတွေ၊ အဆိုတွေ၊ အစဉ်အလာတွေ၊ အတွေးအခေါ်တွေ အားလုံးက အမြဲတမ်း ပြည်သူနဲ့တသားတည်း ရှိတယ်၊ နိုင်ငံနဲ့ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားနဲ့ တသားတည်း ရှိတယ်၊ အဲဒီလို အမျိုးသားရေး အစဉ် အလာနဲ့ တကယ့် မျိုးချစ်စိတ် အစစ်အမှန်ကို ဖော်ကျူးတဲ့ စာတွေက စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ အမြဲတမ်း ဖီလာဆန့်ကျင်နေတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီစာတွေကိုကျောင်းသုံးပြဌာန်းနေတာဟာ ပျံ့ပွားကျယ်ပြန့်အောင် လုပ်သလိုဖြစ်နေတယ်၊ ဒါကိုမလိုလားတဲ့ အတွက် အခုလိုဖြုတ်ပစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဆရာဇင်လင်းက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ အနေနှင့် ယင်းသို့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို ပြောင်းလဲပြဌာန်းရခြင်းမှာ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီရန်အတွက်ဟု ကြေညာ ပြောဆိုနေသော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ သခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည်များကို ဖြုတ်ပစ်ခြင်း သည် သမိုင်းကြောင်းကို ဖြောက်ပစ်ချင်၍ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့မှ အခြေခံပညာ အထက် တန်း အဆင့် သင်ကြားနေသော ဆရာတဦးက ပြောဆိုသည်။
“သင်ရိုးပြောင်းတာက အစိုးရ ကြေညာချက်အရ ဆိုရင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီအောင်၊ ဂျီစီအီး လယ်ဘယ်နဲ့ ညီအောင်လို့ ဆိုတယ်၊ တကယ် တန်းကျ နိုင်ငံတကာ အဆင့် မီသလားဆိုတော့ သင်ရိုးကို အစအဆုံးပြောင်းတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့ နဂို သင်ရိုး ပေါ်မှာ မွမ်းမံ တာပဲ ရှိတယ်၊ နည်းနည်းစီ ထပ်တိုးတယ်၊ နည်းနည်းစီ ဖြုတ်ပစ်တယ်၊ မနှစ်ကလည်း ၉ တန်းကို ပြောင်းထား တယ်၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့် က လုံးဝ မမီပါဘူး၊ သူငယ်တန်းကစပြီး၊ အခြေခံကစပြီး အကုန်လုံးပြင်မှ ရမှာ၊ စာမေးပွဲ စနစ် တွေပြောင်းရမယ်၊ စာအုပ်စာတမ်းတွေ နိုင်ငံတကာမီအောင် လုပ်ပေးရမယ်၊ ၉ တန်း ၁၀ တန်းကျမှ စပြောင်းလို့ မဖြစ် နိုင်ဘူး”ဟု လည်း ၎င်းက ပြောသည်။
ယခု သင်ရိုးသစ်သည် အင်္ဂလိပ်စာတွင်လည်း အနည်းငယ်သာပြောင်းလဲမှုရှိပြီး ရူပဗေဒ ဘာသာရပ်တွင်မူ သင်ခန်းစာ ထပ်တိုးလာကြောင်းနှင့် ကျောင်းသားနှင့် ဆရာများအတွက် ခက်ခဲထူးခြားမှု များစွာမရှိနိုင်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက် ပြောဆိုသည်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ စာမေးပွဲ စနစ်မှာ အရည်အသွေးထက် အတန်းအောင်ရေးအတွက် နှစ်စဉ် အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း ညီမျှမှု ရှိရန် ထိန်းညှိပြုလုပ်ထားသော စနစ်ဖြစ်၍ ယခု နှစ် ၁၀ တန်းအောင်နှုန်းမှာလည်း ယခင်နှစ်များကနှင့် ကွာခြားမှု မရှိဟု အထက်ပါ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အထက်တန်းပြ ဆရာ၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
ဒေါက်တာ သိန်းလွင် က မူ ပညာရေးသည် ကျောင်းသား၊ မိဘ ၊ နိုင်ငံနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လွတ်လပ်စွာလေ့လာ သင်ယူနိုင် သော ပညာရေးမျိုးဖြစ်သင့်ကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်သူ အလိုကျ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးသည့် ပညာရေးမျိုး မဖြစ်သင့်ကြောင်း ပြောသည်။
“နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီတာ မမီတာထက် အုပ်ချုပ်တဲ့လူတစုရဲ့အမြင်နဲ့ ပြောင်းလဲတာမျိုး မဖြစ်သင့်ဘူး၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လေ့လာ သင်ယူနိုင်ရမယ်၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးခေါ်စဉ်းစားနိုင်ရမယ် ဆိုတဲ့ ပညာရေးမျိုး Critical Thinking မျိုးကို သွားရမယ်၊ အဲဒီလို ဆိုရင် လူငယ်တွေက အားလုံးကို လေ့လာမယ်၊ လေ့လာနိုင်ဖို့ လည်း လမ်းဖွင့်ပေးရမှာပဲ”ဟု ၎င်းက ပြောကြားသည်။
ယခုသင်ရိုးသစ်၌ ပြည်ပတွင်ရောက်ရှိနေထိုင်လျှက်ရှိသော ကဗျာ ဆရာ မောင်စွမ်းရည်၏ “ဘဝနှင့်အလှ”ကဗျာနှင့် လယ်တီ ဆရာတော်ကြီး၏“ခွင့်သာခိုက်မှ မလိုက်ချင်လျှင်”တေးထပ်တို့ကိုလည်း ဖြုတ်ပယ်ထားသည်။ ဆရာ မောင်စွမ်းရည်သည် ပြည်ပသို့ရောက်ရှိချိန်မှ စ၍ စစ်အစိုးရ ဝေဖန်စာများကို အစဉ်တစိုက်ရေးသား နေသူတဦး ဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ ပြောင်းလဲပြဌာန်းလိုက်သည့် သင်ရိုးသစ်ကို ယခုလ ၂ ရက်နေ့ ကျောင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှ စတင်ကာ ကျောင်းသားများ သင်ကြား နေကြရပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
PONJA အစီရင်ခံစာက လေဘေး အကူအညီတွေ ရှာပေးနိုင်မှာလား
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 24 2008 20:11 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ နာဂစ်မုန်တိုင်းအလွန် ပူးတွဲ အကဲဖြတ် လေ့လာရေးအဖွဲ့ (PONJA) ၏ အစီရင်ခံစာကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာ လေဘေး ဒုက္ခသည် များအတွက် နောက်ထပ် ရံပုံငွေများ ရှာမည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက တနင်္လာနေ့က ပြောကြားသွားသည်။
PONJA အစီရင်ခံစာသည် ဆိုင်ကလုံး တိုက်ခတ်အပြီး အခြေအနေမှန်ကို ထင်ရှားစွာ ပြသနိုင်လိမ့်မည်၊ ဒုက္ခသည်များ လိုအပ်သည့် အကူအညီ ပမာဏကိုလည်း ရောင်ပြန်ဟပ် ဖော်ပြနိုင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးရုံး ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ Laksmita Noviera က ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒီ အကဲဖြတ် အစီရင်ခံစာ ရလဒ်တွေကို အလှူရှင်တွေဆီက နောက်ထပ် ရံပုံငွေ ထပ်မံတောင်းခံမယ့် ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်ကြားချက်တွေမှာ ထည့်သွင်း အသုံးချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု Noviera က ပြောသည်။
ကုလအဖွဲ့ဝင်များ၊ မြန်မာအစိုးရ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအသင်း (ASEAN) မှ ကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်သည့် သုံးပွင့်ဆိုင် ပင်မအုပ်စု (TCG) က အဖွဲ့ဝင် ၂၅ဝ ဦးပါ အဖွဲ့ကို နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အပျက်အစီး၊ အထိအခိုက် ပမာဏကို လေ့လာ အကဲဖြတ်ရန် PONJA ကို စေလွှတ်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါ မုန်တိုင်းကြောင့် လူပေါင်း ၁၃၃ဝဝဝ သေဆုံး၊ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရသည်။
PONJA ၏ လုပ်ငန်းများကို ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့က စတင်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် (ADB) တို့မှ နည်းပညာ ကျွမ်းကျင်သူများလည်း ပူးပေါင်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ မုန်တိုင်းအတွင်း အထိအခိုက် အများဆုံး ရန်ကုန်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းမှ ဒေသများသို့ ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့ရာ ကနဦး လေ့လာအကဲဖြတ်မှု လုပ်ငန်းများ ပြီးဆုံးပြီ ဖြစ်ကြောင်း PONJA က ဇွန်လ ၂ဝ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့သည်။
“အရေးအကြီးဆုံး အချက်ကတော့ ဒီလေ့လာ အကဲဖြတ်မှုကနေ အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုပြီး ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ ထင်ထင်ရှားရှား ဖြစ်တာတွေ တွေ့လာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်တာပါဘဲ” ဟု Noivera က ဆိုသည်။ ဤ အကဲဖြတ်ချက်ကို နောက်ထပ် ရံပုံငွေများ ရှာဖွေ တောင်းခံရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
မုန်တိုင်းအပြီး ပြုလုပ်သော ဤအစီရင်ခံစာသည် ယုံကြည်ကိုးစားရမှု တစုံတရာ ရှိနိုင်သော်လည်း နောက်ထပ်ရံပုံငွေ ရရှိရန်နှင့် အလှူရှင် နိုင်ငံများကို ဆွဲဆောင်နိုင်ရန်မှာမူ မြန်မာ စစ်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းအကြား တည်ရှိနေသည့် ကွာဟချက်ကို နီးစပ်စေရန် လုပ်ပေးနိုင်သည့်အပေါ် မူတည်နေသည်ဟု မြန်မာ သုတေသီတဦးက ပြောသည်။
“သူတို့ (လေ့လာအကဲဖြတ်အဖွဲ့) က လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်ဟာ အများ ယုံကြည်ကိုးစားခံရမှုတော့ ရှိမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဒီအစီရင်ခံစာ ရလဒ်ကို ကြည့်ပြီး အလှူရှင်တွေက ငွေ ပေး၊ မပေး ဆိုတာတော့ ပြောဘို့လည်း ခက်ပါတယ်။ ခန့်မှန်းဘို့လည်း ခက်ပါတယ်” ဟု ဝါရှင်တန် အခြေစိုက် သုတေသီ ဦးဇော်ဦးက ပြောဆိုသည်။
TCG ရဲ့ အကဲဖြတ် လုပ်ငန်းဟာ တကယ့် ရလဒ်ကောင်းများ ရလာနိုင်သော်လည်း အလှူရှင်များထံမှ နောက်ထပ် ရံပုံငွေများ ရရှိရန်မှာမူ သေချာစွာ စေ့စပ်ဖျန်ဖြေပေးရန် လိုသေးကြောင်း ဦးဇော်ဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“အလှူရှင်တွေနဲ့ မြန်မာအစိုးရကြားမှာ သေသေချာချာ စေ့စပ်ဖျန်ဖြေပေးဘို့ လိုသေးတယ်” ဟု ဦးဇော်ဦးက ပြောသည်။
ဆိုင်ကလုံး ဒုက္ခသည်များကို ကူညီရန် လိုအပ်သည်ဟု ခန့်မှန်း တွက်ချက်ထားသည့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆၉ ဒဿမ ၅ သန်းအနက် ယခုအထိ ၄၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ လက်ခံရရှိသေးသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
လော်ဘီ အဖွဲ့တခုဖြစ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ယှဉ်ပြိုင် အာဆီယံကွန်ရက် (AltASEAN) ၏ ညှိနှိုင်း ဆက်သွယ်ရေးမှူး ဒက်ဘီစတော့ဟတ် (Debbie Stothard) ကမူ မြန်မာ စစ်အစိုးရ၏ ပြုမူ ဆောင်ရွက်ပုံများသည် နိုင်ငံတကာ အလှူရှင်များ၏ မုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များကို ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးလိုစိတ်ကို ရှုပ်ထွေးသွားစေသည်ဟု ဆိုလိုက်သည်။
“အတော်များများက သူတို့ ဘယ်လောက်ပေးပေး၊ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေဆီ ရောက်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ စိုးရိမ်နေကြတာ” ဟု စတော့ဟတ်က ဆိုသည်။
နိုင်ငံတကာ အကူအညီများ လက်ခံရာ၌ စစ်အစိုးရဘက်မှ နှေးကွေးနေခြင်းနှင့် ဝန်လေးနေခြင်းတို့ကို စတော့ဟတ်က ပြစ်တင် ပြောကြားသည်။ ဤအချက်သည် ဒုက္ခသည်များကို အမှန်တကယ် ကူညီလိုစိတ် မရှိကြောင်း ပြသနေသည်ဟုလည်း သူမက ဆိုသည်။
“နအဖ က ဆိုင်ကလုံးအကြောင်းပြုပြီး ငွေဖန်ချင်နေတာတော့ ဒီတခါ အတော်ထင်ရှားတယ်” ဟု တိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ရန် စစ်အစိုးရ ဖွဲ့စည်း ထားသည့် အဖွဲ့ဖြစ်သော SPDC ကို ရည်ညွှန်းကာ စတော့ဟတ်က ပြောကြားသွားသည်။
ဆိုင်ကလုံးအလွန် ကာလသည် စစ်အစိုးရကြောင့် ပိုမို ဆိုးရွားသွားခဲ့ရကြောင်းလည်း သူမက ဆက်ပြောသည်။
“ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း မတိုက်ခင်ကရော၊ မုန်တိုင်းတိုက်ပြီးမှရော အကြီးဆုံး ပြဿနာက (SPDC) ပဲ” ဟု စတော့ဟတ် က ဆိုသည်။
Ecovision ဂျာနယ် အမျိုးသမီး သတင်းထောက် ဖမ်းဆီးခံရ
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 24 2008 18:32 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများထံ သွားရောက် အကူအညီ တောင်းခံသည့် လေဘေး ဒုက္ခသည်များ၏ သတင်း လိုက်ယူခဲ့သော အမျိုးသမီး သတင်းထောက် တဦးကို အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားသည်မှာ သီတင်းပတ် နှစ်ပတ်ကျော်သွားပြီဟု ဂျာနယ်တိုက် အပြောအရ သိရသည်။
စီးပွားရေးကို အသာပေး ဖော်ပြသည့် အပတ်စဉ်ထုတ် Ecovision ဂျာနယ်တိုက်မှ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် မအိမ့်ခင်ဦးသည် ဇွန် ၁ဝ ရက်နေ့က နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒုက္ခသည်အချို့က နိုင်ငံတကာ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း (အန်ဂျီအို) များထံ အကူအညီ တောင်းခံရေး ကြိုးစားခြင်း ကို သတင်းလိုက်ယူရင်း အဖမ်းခံရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အမည်မဖော်လိုသူ Ecovision ဂျာနယ်တိုက် တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
မအိမ့်ခင်ဦးကို တာမွေမြို့နယ် ရဲစခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး မနက်ဖြန် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် တာမွေမြို့နယ် တရားရုံးတွင် စတင်ရုံးထုတ်မှာ ဖြစ်သည်။
ရဲက သတင်းထောက်သည် ဒုက္ခသည်များ၏ ဓာတ်ပုံရိုက်၍ ပြည်ပအခြေစိုက် သတင်း မီဒီယာများသို့ ရောင်းစားရန် ကြံစည်သည်ဟု စွပ်စွဲ ထားကြောင်းလည်း ဂျာနယ်တိုက် အပြောအရ သိရသည်။
“သတင်းရောင်းစားဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ သူ့မှာလည်း အဲလို အဆက်အသွယ်လည်း မရှိဘူး။ သူက ရိုးရိုးသားသား ဂျာနယ်လစ် တယောက်ရဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ရင်းနဲ့ ဖြစ်သွားတာပါ” ဟု ဂျာနယ်တိုက်က ပြောသည်။
တောင်ဒဂုံမြို့နယ်မှ အများစု ပါဝင်သော လေဘေးဒုက္ခသည် ၃ဝ ခန့်က အစိုးရက ထောက်ပံ့မှု နည်းပါးလွန်းသည်ဟု ဆိုကာ ရန်ကုန်အခြေစိုက် အန်ဂျီအိုများထံ အကူအညီ တောင်းခံရန် ကြိုးစားခဲ့ကြရာ မအောင်မြင်ဘဲ အချို့ အဖမ်းခံလိုက်ရသည်။ (မဇ္ဈိမတွင် ဖော်ပြပြီးဖြစ် - ရန်ကုန်ရှိ အန်ဂျီအိုများထံ အထောက်အပံ့ရရန် ကြိုးစားသူများ ဖမ်းဆီးခံရ)။ မအိမ့်ခင်ဦးကိုပါ ဖမ်းဆီးသွားခြင်းကို ယခုမှ သတင်းထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
လေဘေး ဒုက္ခသည်များကို ဖမ်းဆီးသွားခဲ့သူများမှာ အရပ်ဝတ်များ ဝတ်ဆင်ထားပြီး ထောက်လှမ်းရေးများ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း မျက်မြင်သက်သေ တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောပြခဲ့သည်။ အချို့သော ဒုက္ခသည်များ နောက်ပိုင်းတွင် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
သတင်းထောက်ကို တာမွေမြို့နယ် နတ်မောက်လမ်းရှိ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ရုံးရှေ့ (ယူအန်ဒီပီ) တွင် အဖမ်းခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရန်ကုန် စာနယ်ဇင်း အသိုင်းအဝိုင်းမှတဆင့် မဇ္ဈိမက စုံစမ်း သိရှိရသည်။
“ကျနော်ပြောချင်တာက ဒီကလေးက အလုပ်ဝင်တာလည်း ၂ လလောက်ပဲ ရှိသေးတယ်။ အလုပ်လည်း ကျိုးစားတယ်။ အမြဲ active ဖြစ်တယ်။ သူများ ဂျာနယ်တွေလိုပဲ သတင်းထူး၊ သတင်းဦး လိုချင်လို့ လုပ်တာဖြစ်တော့ အန္တရာယ်ကို သူမမြင်နိုင်ဘူး ဖြစ်တယ်” ဟု ဂျာနယ်တိုက်က ပြောသည်။
တရုတ်နယ်စပ်တွင် ဝစ်သောက် ဆိုင်ကယ်များ အဝယ်လိုက်နေ
အင်္ဂါနေ့၊ ဇွန်လ 24 2008 17:21 - မြန်မာစံတော်ချိန်
ရွှေလီ။ ။ နိုင်ငံတဝန်းရှိ ဝစ်သောက်ဆိုင်ကယ်များ လိုင်စင် ထုတ်ပေးမည် ဆိုသဖြင့် မြန်မာနယ်စပ် ရှမ်းပြည်နယ် မူဆယ် တဖက်ကမ်းရှိ တရုတ်ပိုင် ကြယ်ခေါင်မြို့တွင် ဆိုင်ကယ်ရောင်းအား ၃ဝဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော် မြင့်တက်သွားသည်။
လိုင်စင်မဲ့ဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ခိုးသွင်းယူလာသော ဆိုင်ကယ်များကို လာမည့် လဆန်းပိုင်းတွင် ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ လိုင်စင် ထုတ်ပေးမည်ဟူသည့် သတင်းကြောင့် တရုတ်နယ်စပ်မြို့ ကြယ်ခေါင်တွင် မြန်မာဘက်သို့ သွင်းမည့် ဆိုင်ကယ်များ ယခင်က တရက်လျှင် အစီးရေ ၃ဝဝ ခန့် အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ရာမှ ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း တနေ့လျှင် အစီး ၁ဝဝဝ ခန့်အထိ အဝယ်လိုက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
မူဆယ် ကုန်သည်ကြီးများ အသင်းဝင် ကုန်သည်တဦးက “ဇူလိုင် လဆန်းပိုင်းမှာ လိုင်စင်တွေ ပြန်ချပေးတော့မယ်လို့ ပြောနေတယ်။ လိုင်စင် ထုတ်မပေးတော့ အခွန်မရတာဘဲ ရှိတယ်။ ဆိုင်ကယ်ကတော့ သွားနေကြတာပဲ။ ထိန်းမနိုင်တော့တာရယ်၊ ငွေလိုနေတာရယ်၊ အဲဒါလည်း ပါမှာပေါ့။ နံပါတ်ပြားကတော့ ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် တပ်လို့ရတယ်။ အပြင်မှာလည်း ဝယ်လို့ရတယ်။ တရားဝင် လိုင်စင်နဲ့ စီးကြတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုပဲ စီးနေကြတာ” ဟု သူက ပြောသည်။
နယ်စပ်မှတဆင့် သွင်းလာသော ဆိုင်ကယ်များသည် သွင်းကုန် အခွန်ပေးဆောင်ခြင်း မရှိသော ဆိုင်ကယ်များကို မှောင်ခို တိုက်ဖျက်ရေးအရ စစ်အစိုးရက လိုင်စင်မဲ့ ဆိုင်ကယ်များကို ကုန်းလမ်း ပို့ဆောင်ရေး ဦးစီးဌာနအောက်တွင် မှတ်ပုံတင်ပေးခြင်းကို ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်တွင် ရပ်ဆိုင်း ထားခဲ့သည်။
သို့သော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အချို့ကို လာဘ်ငွေပေး၍ မှောင်ခို ခိုးသွင်းမှုများကတော့ ဆက်လက် တည်ရှိနေသည်မှာ လျို့ဝှက်ချက် ပင် မဟုတ်သလို ဖမ်းဆီးခံရမှုများ ရှိနေသည်။
မန္တလေးမှ ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီသမား တဦးကလည်း “၇ လပိုင်း ၂ ရက်နေ့မှာ တနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ကယ်လိုင်စင် ထုတ်ပေးတော့မယ်။ အဲဒါကြောင့် အဝယ် အတက်များကြတာ။” ဟု ပြောသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်း ရံပုံငွေအတွက် ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်များ တရားဝင် ပြုလုပ်ပေးမည်ဟု သတင်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ထွက်ပေါ်နေသည်။ လိုင်စင် ထုတ်ပေးသော်လည်း ဓာတ်ဆီ ရောင်းချပေးသွားမှာ မဟုတ်ဟုလည်း ပါရှိသည်။
တရုတ်နိုင်ငံလုပ် ဆိုင်ကယ် အမျိုးအစား အများအပြားအနက် မြန်မာများ အကြိုက်များသည့် Kenbo နှင့် Luojia အမျိုးအစား ဆိုင်ကယ်များမှာ ဝယ်သူများလွန်းလှသဖြင့် တန်းစီစနစ်ဖြင့်ပင် ရောင်းချနေကြရသည်။
ကြယ်ခေါင်မြို့တွင် ရောင်းချသည့် ဆိုင်ကယ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သီးသန့် ထုတ်လုပ်သည့် ဆိုင်ကယ်များဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းသုံး ဆိုင်ကယ်များထက် ဈေးပိုချိုကာ တရုတ်ယွမ်ငွေ ၂၅ဝဝ (ကျပ်ငွေ ၄ သိန်း ၅ သောင်းခန့်) မှ ၂၈ဝဝ (ကျပ် ၅ သိန်းကျော်) ကျော်အထိ ပေါက်ဈေး ရှိနေသည်။
ထိုသို့ ဖြစ်နေသလို မန်စီမြို့နယ်အတွင်း ဇွန်လအတွင်း ကယ်ရီသမားများ စီးလာသည့် ဆိုင်ကယ်အစီး ၇ဝ ကျော် ဖမ်းဆီးခံထားရပြီး ကွက်ခိုင် ဘက်တွင်လည်း ဖမ်းဆီးရေးအဖွဲ့မှ ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးမှုများကြောင့် ကယ်ရီသမားတဦး သေနတ်မှန် သေဆုံးပြီး နှစ်ဦး ဒဏ်ရာရခဲ့မှုများ ရှိခဲ့သည်။
ကဒုံကနိ သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်း နေထိုင်သူများကို ဖယ်ရှားပေးရန် စာထုတ်ပြန်
အေးချမ်းမြေ့ ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၀၈
နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရသော ဘိုကလေးမြို့နယ်အပိုင် ကဒုံကနိ သစ်တော ကြိုးဝိုင်း အတွင်း နေထိုင်လျှက် ရှိသူများအနေနှင့် အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှားပေးရန် သစ်တောဝန်ကြီးဌာနက စာထုတ်ထားကြောင်း ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်သူများနှင့် နီးစပ်သည့် ဒေသခံတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကဒုံကနိ သစ်တောကြိုးဝိုင်းကို ယခင်က ဧက ၃၃၃၄၀ သာ သတ်မှတ်ထားသော်လည်း ယခုအခါ ၅၈၄၄၃ ဧက သို့ တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပြီး ၎င်းနယ်မြေအတွင်း နေထိုင်သည့် ဒေသခံများကို အမြန်ဆုံးဖယ်ရှားပေးရန် တောင်းဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
“သစ်တောဦးစီးဌာနက စာထုတ်တာပါ။ သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာ ရယက လူကြီးတွေအနေနဲ့ ဒေသခံတွေကို ပြောပေးဖို့ ညွှန်ကြားထားပါတယ်” ထိုသူက ဆက်ပြောသည်။
၎င်းစာတွင် ကဒုံကနိ သစ်တောကြိုးဝိုင်းအတွင်း လုံးဝထိန်းသိမ်းကာကွယ်ထားသည့် သစ်တောနယ်မြေ အတွင်းမှ အိမ်ရာ များ အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှားပေးပါရန် ဟု ရေးသားထားပြီး မိတ္တူကို သစ်တောဝန်ကြီးဌာန ညွန်ကြားရေးမှူး၊ လက်ထောက် ညွှန်ကြားရေးမှူး အပါအဝင် ၅ နေရာသို့ ပို့ထားကြောင်း စာကို မျက်မြင်ဖတ်ရှုလိုက်ရသူက ပြောပြသည်။
သစ်တောဝန်ကြီးဌာနက ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ခြင်း ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာ ရယက များသို့ ဇွန် ၁၇ ရက် နေ့က ၎င်းစာ ရောက်ရှိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“အဲဒီနေရာမှာ နေကြတဲ့ ရွာပေါင်း ၃၀ ကျော်ရှိမယ်။ လူဦးရေ သောင်းနဲ့ချီပြီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒုက္ခသည် တော်တော်များများက လယ်ပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီး အဲဒီဒေသတွေကို ပြန်သွားကြတာပဲ” ဟု ဒေသခံ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ဆောင်နေသူတဦးက ပြောသည်။
သစ်တောဦးစီးဌာနက စာထုတ်ထားသော်လည်း မည်သည့်ရက် မည်သည့်အချိန်တွင် နောက်ဆုံးထား ပြောင်းရွှေ့ရမည် ဆိုခြင်းနှင့် မည်သည့် ဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့ရမည် စသည်ဖြင့် အတိအကျ မပါရှိကြောင်း စာကို မျက်မြင်တွေ့ရှိလိုက် သူက ပြောပြသည်။
“ကျေးရွာ ရယက တွေဆီ စာရောက်နေပြီ ဆိုပေမယ့် အချိန်တွေ နေရာတွေ ဘာမှမပြောထားတော့ ဒေသခံတွေကို မပြော ရသေးဘူး။ ဒေသခံတွေထဲက ဘယ်သူမှလည်းမသိကြသေးဘူး” ဟု ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
၎င်းဒေသတွင် နေထိုင်သူတို့မှာ ရေလုပ်ငန်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းတို့ဖြင့် အသက်မွေးကြ သူများဖြစ်ကြပြီး ယခုအခါ ဒုက္ခသည် စခန်းများမှ အနှင်ခံရသူတို့ ပြန်လည် နေထိုင်လျှက်ရှိကာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကိုင်ရန် စတင်ကြိုးစားနေပြီဖြစ်ကြောင်း သူက ပြောသည်။
NEJ/ ၂၄ ဇွန် ၂၀၀၈
ထိုင်းရဲ၏ ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခြင်းခံရသဖြင့် ထောင်ဒဏ် (၁) နှစ်စီ ပြစ်ဒဏ်ကျခံရသည့် မြန်မာ အလုပ်သမား (၁၂) ဦးက အမှန်တရားအတိုင်း ဖြစ်စေရေးအတွက် အကူအညီပေးပါရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအား ပန်ကြားခဲ့သည်။
အမှုမှန်အတိုင်းဖြစ်စေရန် မြန်မာအလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်နေသည့်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ထိုင်းနှင့်မြန်မာ ရှေ့နေအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့် ကူညီပေးရန် ယနေ့နံနက် ထောင်ဝင်စာ
လွန်ခဲ့သည့် ဧပြီ (၃) ရက်တွင် မဲဆောက်မြို့ မယ်ပအရပ် အမှတ် (၅၆၈) အပိုင်း (၂) တွင်ရှိသည့် NC Union Garment အထည်ချုပ်စက်ရုံတွင် မြန်မာအလုပ်သမတဦးနှင့် ထိုင်းအလုပ်သမတဦးတို့ အလုပ်ခွင်အတွင်း အချင်းများပြီး အပြန်အလှန် ရိုက်ပုတ်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ယင်းဖြစ်ရပ်ကို ထိုင်းအလုပ်သမက ရဲကို တိုင်ကြားခဲ့ရာ စက်ရုံသို့ ထိုင်းရဲများ ရောက်လာသဖြင့် အဆိုပါ မြန်မာအလုပ်သမအား ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါက ကျန်မြန်မာအလုပ်သမားများက မိမိတို့လည်းလိုက်မည်ဟု ပြောသဖြင့် ထိုင်းရဲက ၎င်းစက်ရုံရှိ မြန်မာအလုပ်သမား (၁၃၆) ဦးကို မဲဆောက်ရဲစခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
ထိုအလုပ်သမားများကို ထိုင်းရဲက မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ၎င်းတို့ထဲမှ ခေါင်းဆောင် များဟု ယူဆရသူ (၁၂) ဦးကို တာဝန်ဝတ္တရားနှောင့်ယှက်မှုဟုဆိုကာ တရားစွဲဆိုခဲ့ရာမှ ထောင်ဒဏ် ကျခံရခြင်းဖြစ်သည်။
မဲဆောက်အခြေစိုက် ထိုင်းရှေ့နေများအဖွဲ့၏ အလုပ်သမားရေးရာ ဥပဒေ ဆွေးနွေးအကြံပြုဌာန (Labor Law Clinic (LLC) မှ ရုံးဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်သူ နိုင်ကျန်ပီက “ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူခံ
ဝင်မယ်ဆိုရင် ကာယကံရှင်တွေရဲ့ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေ ရုံးကိုလာပြီး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ ကူညီဖို့လည်း အရန်သင့်ပါပဲ” ဟု ပြောသည်။
ယခုကဲ့သို့ ထောင်ဒဏ်ကျခံရခြင်းမှာ အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သည့်အဖွဲ့ကမှ အတည်တကျ လိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ထောင်ဒဏ်ကျခံရသူ မြန်မာအလုပ်သမား (၁၂) ဦးသည် အလုပ်သမားလက်မှတ်ရှိသူများဖြစ်ပြီး အလုပ်ရှင်က ထိရောက်သည့်ကူညီမှု မပေးသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ဖြစ်ရသည်ဟု ၎င်းစက်ရုံမှ အလုပ် သမားတဦးက ပြောသည်။
ထောင်ဒဏ်ကျခံရသည့် မြန်မာအလုပ်သမား (၁၂) ဦးမှာ ကိုသက်ဦး၊ ကိုအာကာထွန်း၊ ကိုဇော် ထက်၊ ကိုသီဟ၊ ခွန်ပေါရန်း၊ ကိုကျော်ကြီး၊ ကိုရဲလေး၊ ကိုကျော်သူ၊ ကိုထွန်းထွန်း၊ မနွယ်နီလှိုင်၊ မအိမြနှင့် မသဇင်ဦးတို့ဖြစ်သည်။ ။
Agencies/ ၂၄ ဇွန် ၂၀၀၈
သိန်းထီဆုကို သိန်း(၁) ထောင်ထိ တိုးပေးရန်စီစဉ်
ယခု ၂၀၀၈ ခုနှစ်မကုန်မီ အောင်ဘာလေထီ သိန်းထီဆုကို သိန်း (၁,၀၀၀) တိုးပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲမှ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
ယခု အများဆုံးဆု ကျပ်သိန်း (၅၀၀) ဆု၊ သိန်း (၃၀၀) နှင့် သိန်း (၁၀၀) ဆုများအထိရှိပြီး အနည်းဆုံး (၂) သောင်းဆုထိရှိသော်လည်း ယခု ဆု သိန်း (၁,၀၀၀) ဖြစ်ပါက သိန်း (၇၀၀)၊ သိန်း (၅၀၀)၊ သိန်း (၃၀၀) နှင့် သိန်း (၁၀၀) ဆုများ ရှိမည်ဖြစ်ပြီး အနည်းဆုံး ဆုငွေမှာ ငွေကျပ် (၁) သိန်းဖြစ်မည်ဟု အဆိုပါအရာရှိက ပြောသည်။
ဆုငွေများ တိုးမြင့်လာသည့်အတွက် အက္ခရာများကိုပါ ထပ်မံတိုးမြှင့်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လာမည့်ဇူလိုင်လမှစ၍ ထီအကြိမ် (၂၃၅) ကြိမ်မြောက်တွင် ယခုလက်ရှိ ထီနံပါတ် “က” မှ “အ” ထိ အက္ခရာအပြင် “ကက” အက္ခရာကို ထပ်မံတိုးမြှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခင် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဧပြီအထိ ထီတအုပ်တွင် အက္ခရာအလုံး (၃၀) ရှိရာမှ ၂၀၀၇ ခုနှစ် မေလတွင် အက္ခရာ (၃၂) လုံး၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် အက္ခရာ (၃၃) လုံးထိ ဖြစ်လာခဲ့ပြီး လာမည့်ဇူလိုင်လမှ စ၍ အက္ခရာ (၃၄) လုံးဖြစ်မည်ဟု အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲမှ ထိုအရာရှိက ပြောသည်။
ယင်းသို့အက္ခရာတိုးမြှင့်ရခြင်းမှာ ထီရောင်းအားကောင်းသောကြောင့်ဟု အောင်ဘာလေထီဌာနမှ ပြောပြသော်လည်း အစိုးရအနေဖြင့် ထီစောင်ရေ တိုးမြှင့်ရောင်းချရလေလေ အခွန်ငွေရရှိလေ ဖြစ်သည်ဟု ထီလုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “သူတို့ထုတ်ပေးတာက ထီ (၁၁) စောင်ကို (၁,၀၀၀) ကျပ်၊ (၁) စောင်ကို (၉၀) ကျပ် (၁၀) ပြားကျတယ်။ သူတို့က ပြည်သူကို ဆုငွေပေးတာက ငွေ (၁၀၀) ကျပ်မှာ (၆၀) ရာခိုင်နှုန်း ပေးတယ်။ သူတို့က (၄၀) ရာခိုင်နှုန်း ထိုင်ရင်း ရပြီးသားပဲ။ ဒါကို အခုအက္ခရာတွေ ထပ်ထပ်ပြီး တိုးနေတာ၊ အခွန်က ၀င်ငွေရပြီးရင်းရတာ၊ ပွပြီးရင်းပွတာပဲ” ဟု ပြောသည်။
ယခုလာမည့် (၂၃၅) ကြိမ်တွင် “ကက” အက္ခရာကို တိုးမြှင့်ပြီး နောက်ထပ်အက္ခရာများ ထပ်မံတိုး လာမည်ဟု သိရသဖြင့် ထီထိုးသူများအနေဖြင့် ထိုးရမည့်ထီစောင်ရေများလာသဖြင့် သိန်း (၁,၀၀၀) ထီကို အားမကျကြောင်း လစဉ်ထီထိုးနေသူတဦးက ပြောသည်။
အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲအနေဖြင့် သိန်းဆုကို တိုးမြှင့်သော်လည်း ထီစောင်ရေဈေးကို တိုးမြှင့် မည်မဟုတ်ကြောင်း သိရသည်။ ထီအက္ခရာများ တိုးမြင့်လာပါက ပေါက်ရန် အလွန်ခဲယဉ်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထီလောကမှ သုံးသပ်ကြသည်။
ထီလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ယခုအခါ သိန်း (၅၀၀) ထီပေါက်လျှင် သိန်း (၅၀၀) ကို အပိုဆုအဖြစ် ချီးမြှင့်ကြောင်း၊ ယခု သိန်း (၁,၀၀၀) ထီပေါက်လျှင် အပိုဆုမှာ သိန်း (၁,၀၀၀) အထိ သတ်မှတ် မည်ဖြစ်ကြောင်း ထီလုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။ ထီလုပ်ငန်းရှင်များက အပိုဆုကို သိန်း (၁,၀၀၀) ထက် ပိုပေးချင်သော်လည်း အစိုးရက ၎င်းတို့ပေးသည့် ဆုငွေထက် ပိုပေးမည်ကို မလိုလားကြောင်း သိရသည်။
အင်္ဂလိပ်အစိုးရလက်ထက် စစ်ကြိုကာလတွင် ဖျက်သိမ်းလိုက်သော “သဿမေဓနှင့်လူခွန်တော်” အစား ၀င်ငွေရရှိရန် အစိုးရသိန်းထီဌာနကို ၁၉၃၈ ခုနှစ် ဇွန်လ (၁) ရက်နေ့မှ စတင်၍ တနှစ်လျှင် (၄) ကြိမ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် တနှစ် (၆) ကြိမ်သို့ တိုး၍ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကာ ၁၉၄၈ ခုနှစ် မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးရသည့်အချိန်မှစ၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရ အောင်ဘာလေသိန်းဆုအမည်သို့ ပြောင်းလဲ ခဲ့သည်။
၁၉၇၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ (၁) ရက်နေ့တွင် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်အရ ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနအမည်ဖြင့် ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာ “တံဆိပ်ခေါင်းနှင့် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ” ဟူ၍ ဌာနခွဲတခုအဖြစ်ပါဝင်လာကာ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင် တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ကို “မြေခွန်၊ အင်းအိုင်ခွန်နှင့် ယစ်မျိုးခွန်ဌာနခွဲ” တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စေခဲ့ရာ “အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲ” တခုတည်း အမည်ဖြင့် ယခုထိ တည်ရှိနေသည်။
လေဘေးအလှူဖုန်းများကို ဆက်သွယ်ရေးမှ ရောင်းစား
နာဂစ်လေမုန်တိုင်းဘေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံ ZTE Corporation ကုမ္ပဏီက လှူဒါန်းသည့် WCDMA ၄၅၀ ဖုန်းများကို တလုံး ကျပ် (၁၅) သိန်း (၅) သောင်းဖြင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးက ရောင်းစားနေကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးရုံးမှ အရာရှိတဦးက ပြောသည်။
“လေဘေးအတွက်ဆိုပြီး တရုတ်ပြည် ZTE Corporation ကုမ္ပဏီက WCDMA ၄၅၀ ဖုန်းတွေ အကူအညီပေးတယ်။ သူတို့လှူတာ ရေဒီယို အခြေခံစခန်း (၁၅) ခုနဲ့ မိုဘိုင်းအခြေခံစခန်း (၁) ခု၊ စုစုပေါင်း ဖုန်းအလုံးပေါင်း (၃၀,၀၀၀) တပ်ဆင်နိုင်တယ်။ ဒေါ်လာ (၃.၃) သန်းဖိုး ရှိတယ်။ အဲဒါကို ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းမှာ ရောင်းစားနေတာ” ဟု မရမ်းကုန်း ဆက်သွယ်ရေးရုံးမှ အမည် မဖော်လိုသူ အင်ဂျင်နီယာတဦးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရက အဆိုပါ အလှူခံရရှိသည့် ဖုန်းများအနက် အချို့ကို ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း၌ ကယ်ဆယ် ရေးနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ရန် တာဝန်ပေးထားသည့် ဇေကမ္ဘာ၊ ထူးထရေးဒင်း၊ မက်စ် မြန်မာ၊ ဧဒင်၊ အေးရှားဝေါ၊ ဒဂုံအင်တာနေရှင်နယ်၊ ရွှေသံလွင်၊ တော်ဝင် စသည့် ကုမ္ပဏီပေါင်း (၃၀) အား ကုမ္ပဏီတခုလျှင် (၅) လုံးနှုန်းဖြင့် အလုံး (၁၅၀) ချပေးခဲ့ပြီး ကျန်ရှိသည့် အခြား အလုံးပေါင်းမြောက်များစွာကို ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း၌ ရောင်းစားနေကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရက အဆိုပါ စီဒီအမ်အေ တယ်လီဖုန်းများကို ကတ်သက်သက် ကျပ် (၁၅) သိန်း (၅) သောင်းဖြင့် ချပေးနေပြီး ကုမ္ပဏီများကမူ ဖုန်းအိမ်အပါ ကျပ်သိန်း (၂၀) နှင့် လျှောက်လွှာတင်ရန် မလိုဘဲ ရောင်းပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖုန်းဝယ်ယူခဲ့သည့် ဘိုကလေးမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း၌ လေဘေးကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် ထိရောက်ရန် အတွက် ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအချို့သည် ဆက်သွယ်ရေးစက်များ မြန်မာ ပြည်တွင်း ယူဆောင်လာခဲ့ကြသော်လည်း ရန်ကုန်လေဆိပ်၌ပင် အားလုံးအသိမ်းဆည်းခံကြ ရကြောင်း ပြည်တွင်းအန်ဂျီအိုတခုမှ ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
ထို့အပြင် ကုလသမဂ္ဂအနေဖြင့် ရန်ကုန်မှာ အရေးပေါ် ဆက်သွယ်ရေး စင်တာတခု (Emergency Tele-communications Centre) တည်ထောင်ရန် ယနေ့အချိန်ထိ အကောင်အထည် မပေါ် သေးသကဲ့သို့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်က ဗဟိုဌာနခွဲများနှင့်လည်း ကောင်းမွန်စွာ ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
လေဘေးကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ထိုင်း ရှင်းဆက်တယ်လိုက်ကုမ္ပဏီကလည်း ဂြိုဟ်တုဖုန်းများ လှူဒါန်းခဲ့ပြီး သန်းနှင့်ချီ တန်ဖိုးရှိသည့် ဆက်သွယ်ခွင့်များ ပေးခဲ့သော်လည်း အဆိုပါဖုန်းများကို ကုလသမဂ္ဂအပါအ၀င် မည်သည့် ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့မှ ကိုင်ဆောင်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ဟုလည်း အဆိုပါဝန်ထမ်းက ပြောသည်။
မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး နှုတ်ဆက်ပွဲပြုလုပ်
ရာထူးတိုးနှင့် နေရာအပြောင်းအရွှေ့အတွက် နှုတ်ဆက်ညစာစားပွဲတခု မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့်၏ နေအိမ်တွင် ဇွန်လ (၂၂) ရက်ညက ကျင်းပခဲ့ကြောင်း ကိုယ်တိုင်တက်ရောက် ခဲ့သည့် ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တခုမှ အရာရှိကြီးတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “တိုင်းမှူးဟာ စစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး တာဝန်နဲ့ ပြောင်းရွှေ့ရမယ်လို့ ပြောတယ်။ အရင် ရဲမြင့်ကြီးခေါ်တဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်ရဲ့ ရာထူးကို ဆက်ခံရမယ်လို့ ပြောတယ်။ ဒါနဲ့ ဧည့်ခံပွဲ လုပ်တာ၊ မြစ်ကြီးနားမှာတော့ ဒါ ထုံးစံပဲ” ဟု ပြောသည်။
စစ်အစိုးရအတွင်း ရာထူးအပြောင်းအလဲများရှိသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း သီးခြား အတည်ပြု၍ မရနိုင်သေးဘဲ မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့်၏ နှုတ်ဆက်ပွဲ ကျင်းပသည့် သတင်းသည် စစ်အစိုးရ ထိပ်ပိုင်းရာထူးအပြောင်းအလဲကို ထင်ဟပ်စေခြင်းဖြစ်သည်။
ထွက်ပေါ်နေသည့် သတင်းများအရ နအဖ ထိပ်ပိုင်းရာထူးကြီးများဖြစ်သည့် နအဖ အဖွဲ့ဝင် စစ်ဆင်ရေးအထူး အဖွဲ့မှူး (၅) ဦး ရာထူးမှ အနားယူပြီး အဆိုပါနေရာများတွင် တိုင်းမှူး (၅) ဦးက အစားထိုး ၀င်ရောက်လာကာ စစ်တိုင်းမှူး (၂) ဦး တိုင်းချင်း အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ကြောင်း၊ စစ်တိုင်းမှူးနေရာများတွင် တပ်မမှူးများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းအုပ်အချို့ ၀င်ရောက်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်လှဌေးဝင်း နေရာတွင် တပ်မ (၆၆) တပ်မမှူးက ၀င်ရောက်တာဝန်
ယူမည်ဖြစ်ပြီး မြို့တော်ဝန် ဗိုလ်မှူးချုပ်အောင်သိန်းလင်း၏ နေရာကိုလည်း အခြားတယောက်
၀င်ရောက်တာဝန်ယူမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အခြားဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင် နေရာအများအပြား၌လည်း အပြောင်းအလဲရှိကြောင်း ရန်ကုန်မြို့၌ သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
ထိုသို့အပြောင်းအလဲသတင်း ထွက်ပေါ်လာခြင်းသည် လာမည့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် အတည်ဖြစ်မည့် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ စစ်တပ်ထဲမှ အရာရှိကြီးများ အရပ်ဘက် ကူးပြောင်းကာ နိုင်ငံရေးလုပ်ရန် ပြင်ဆင်သည့် ပြောင်းရွှေ့မှုကြီး ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရန်ကုန်အသိုင်းအ၀န်းတွင် ထင်မြင်ချက် ပေးနေ ကြသည်။
မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူးနေအိမ်၌ ပြုလုပ်သည့် ဧည့်ခံပွဲသို့ ကချင်လူမျိုး၊ တရုတ်လူမျိုး သူဌေး ကြီးများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး တိုင်းမှူးကို ကျောက်မျက်ရတနာ အပါအ၀င် အဖိုးတန်လက်ဆောင်များ အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
မြစ်ကြီးနားမြို့ ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တခုမှ အဆိုပါအရာရှိကြီးက နအဖ စစ်တပ်အတွင်း ရာထူး အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့ ကချင်ပြည်နယ်နှင့် ပတ်သက်၍ ထူးထူးခြားခြား ပြောင်းလဲမှု ရှိလာမည်ဟုမမြင်ကြောင်း ပြောသည်။
ဇင်ဘာဘွေနဲ့မြန်မာ ခိုင်းနှိုင်းစရာ ဖြစ်လာနေ
ဇင်ဘာဘွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာက ပြောဆိုသုံးနှုန်းတဲ့ စကားတွေက မြန်မာနိုင်ငံ
နဲ့ အတော်လေး တူနေပါတယ်။ ဇင်ဘာဘွေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ အခြေအနေ ဘယ်လောက်
တူသလဲ၊ ကွဲသလဲဆိုတာ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ဦးကျော်ဇံသာက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အမေရိကန် ထိပ်တန်းသံတမန်ကြီးတဦးက ဇင်ဘာဘွေသမ္မတ ရောဘတ် မူဂါဘီ
(Robert Mugabe) ဟာ မြန်မာစစ်အစိုးရလို ပြုမူနေတယ်ဆိုပြီး ပြောဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက မြန်မာအစိုးရဟာ ဇင်ဘာဘွေကတောင် အတုယူရမယ့်နိုင်ငံ ဖြစ်နေပါလား
ဆိုပြီး တွေးထင်စရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒီနှစ်နိုင်ငံကြားမှာ တူတာတွေရှိ
သလို မတူတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ပထမဆုံးတူတာတခုကတော့ အတိုက်အခံတွေကို နှိပ်စက်တဲ့နေရာမှာ လက်သံပြောင်
တဲ့ကိစ္စပါ။ မြန်မာနိုင်ငံက စွမ်းအားရှင်တွေ လက်သံပြောင်သလိုပဲ ဇင်ဘာဘွေက
ရောဘတ် မူဂါဘီရဲ့ နောက်လိုက်တွေကလည်း လက်သံပြောင်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မတူတာတခုကတော့ ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာ ဇာနုလို့ခေါ်တဲ့ Zimbabwe African
National Union လို့ခေါ်တဲ့ပါတီနဲ့ ရောဘတ် မူဂါဘီဆိုတဲ့ နာမည်တို့ဟာ သူတို့နိုင်ငံရဲ့
လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲနဲ့ ခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ သူတို့ဟာ လူဖြူတွေရဲ့ အသားအရောင်
ခွဲခြားမှုကနေ လွတ်မြောက်အောင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာ ထိပ်တန်းက ပါဝင်ခဲ့ပါ
၁၉၈၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့လည်း ရောဘတ် မူဂါဘီရဲ့ ဇာနုပါတီက အနိုင်ရရှိ
ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇင်ဘာဘွေနိုင်ငံမှာ လက်ရှိ ရောဘတ် မူဂါဘီအစိုးရဟာ မြန်မာ
စစ်အစိုးရနဲ့စာရင် သူဟာ တရားဝင်အစိုးရလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် သူတို့နိုင်ငံမှာ တိုင်းပြည်ရဲ့ လယ်ယာမြေကောင်းအများစု လူဖြူတွေလက်ထဲ
မှာရှိနေတာ ရောဘတ် မူဂါဘီအတွက် အကြောင်းပြစရာ ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်
သူက ဒီလယ်မြေတွေအားလုံး လူမည်း အာဖရိကန်တွေလက်ထဲရောက်မှ သူ ရာထူးက
မြန်မာစစ်အစိုးရမှာတော့ အဲဒီလိုအကြောင်းအချက်တွေ မရှိဘူးလို့ ဆိုရမှာပေါ့။
ရောဘတ် မူဂါဘီက ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ပြီး တက်လာတာပါ။ မြန်မာစစ်အစိုးရကတော့
ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးလို့ နိုင်တဲ့ပါတီကို အာဏာမပေးဘဲ ၁၉၉၀ တုန်းက အာဏာသိမ်း
စီးပွားရေးအားဖြင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်နိုင်ငံခြားသား၊ ဘယ်လူဖြူကမှ စီးပွား
ရေးကို ချုပ်ခြယ်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရအတွက်
အကြောင်းပြစရာ မရှိပါဘူး။ သူတို့အကြောင်းပြတာကတော့ ဘာမှမရေရာတဲ့ ပြည်ပ
ကျူးကျော်မှု အန္တရာယ်ကြောင့် သူတို့ ဆက်လက်အုပ်စိုးဖို့လိုတယ်ဆိုပြီး အကြောင်းပြ
တာပါ။ တကယ်တော့ ဒီအကြောင်းပြမှုကလည်း ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြမှုတော့ မဟုတ်
စီးပွားရေးအားဖြင့် နိုင်ငံတကာက ပိတ်ဆို့လို့ နစ်နာရတယ်လို့ မြန်မာစစ်အစိုးရက
လည်း ပြောဆိုနေပါတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာရော။
မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေးအားဖြင့် နစ်နာတာဟာ ပြည်ပကပိတ်ဆို့လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိ
ကအားဖြင့်တော့ စီမံခန့်ခွဲမှု လွဲမှားမှုကြောင့်ပါ။ မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ သူတို့ရဲ့ အပေါင်း
အသင်းတွေ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်မှု မကျွမ်းကျင်တာကြောင့် ဖြစ်တာပါ။ အရှေ့တောင်
အာရှက လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင် ဒါကို ပြောကြပါတယ်။ တကယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံ
ဟာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့တွေရောင်းပြီး ပိုက်ဆံတွေ တော်တော်များများရနေတဲ့နိုင်ငံ
ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကလည်း ဒီလောက် အရေးမကြီးပါဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းလက်ထက်ကလည်း တိုင်းပြည်က လွတ်လပ်ပေမယ့် စီးပွားရေးက
လွတ်လပ်ရဲ့လား၊ မလွတ်လပ်ဘူးဆိုပြီး ပြည်သူပိုင်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီး တိုင်းပြည်ကို
စီမံခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုံးဝမအောင်မြင်ဘဲ ချွတ်ခြုံကျသွားတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။
ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာ အာဖရိကက ယူဂန်ဒါနိုင်ငံမှာ အီဒီအာမင်လက်ထက်မှာ နိုင်ငံခြား
သားတွေ စီးပွားရေး လက်ဝါးကြီးအုပ်လို့ သူတို့နိုင်ငံသားတွေ ဆင်းရဲတယ်ဆိုပြီး နိုင်ငံ
ခြားသားတွေကို လမ်းပေါ်မှာ ကြိမ်နဲ့ရိုက်ပြီး မောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ
လည်း ထွက်သွားရော သူတို့တိုင်းရင်းသားတွေက မစီမံတတ်တဲ့အတွက် တိုင်းပြည်
ချွတ်ခြုံကျသွားတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်က
ဒီနှစ်နိုင်ငံအပေါ် နိုင်ငံတကာရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကရော ထပ်တူကျပါသလား။
နိုင်ငံတကာဆိုတဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းဖြစ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့က
တော့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်
က ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ သဘောထားပါပဲ။ ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေက မြန်မာနိုင်ငံ
ချွတ်ခြုံကျနေတာကို အမြတ်ထုတ်နေကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာ
နိုင်ငံက ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကို ခိုင်းတယ်။
အလားတူ ဇင်ဘာဘွေရဲ့ အိမ်နီးချင်းဖြစ်တဲ့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကလည်း မြန်မာ
နိုင်ငံအပေါ် ထိုင်းနိုင်ငံက ကျင့်သုံးသလို ဇင်ဘာဘွေရဲ့ အားနည်းချက်ကို အခွင့်
ကောင်းယူနေတာ တွေ့ရပါတယ်။ ခြုံပြောရရင်တော့ အမေရိကန်သံတမန် ပြောသလို
ဘယ်သူ့ကို ဘယ်သူက ဆရာတင်သလဲတော့ မသိဘူး၊ ဒီအစိုးရနှစ်ခုကြောင့် ပြည်သူ
တွေ ဆင်းရဲနစ်နာနေရတာတော့ အမှန်ပါပဲ။
(myanmar news)Built to Order: Myanmar’s New Capital Isolates and Insulates Junta
NEWCOMERS TO MYANMAR The air-conditioned penguin house at Naypyidaw’s zoo, inacountry of persistent power shortages.
Official: Myanmar cyclone death toll mounts to 84,537
www.chinaview.cn 2008-06-24 19:59:47 Print
YANGON, June 24 (Xinhua) -- The death toll of Myanmar's cyclone storm Nargis mounted to 84,537 and the number of missing went to 53,836, Myanmar Deputy Foreign Minister U Kyaw Thu disclosed at an ASEAN roundtable on post-Nargis joint assessment for response, recovery and reconstruction held here on Tuesday.
The death toll was up from 77,738 last announced on May 16, while the number of missing was down from 55,917.
The number of the injured remained at 19,359, said Kyaw Thu, who is chairman representing Myanmar inatripartite core group also involving the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the United Nations (U.N.).
According to Kyaw Thu, all national assets including state corporations, agencies and corporations, and the armed forces have been fully mobilized to assist the cyclone-hard-hit delta area.
He revealed that up to now,atotal of 27.6 billion Kyats (25 million U.S. dollars) has been disbursed for emergency assistance.
He said that schooling is restarted despite shortage of school supplies, adding that governance, public services and transportation both land and inland water have been largely back to normal.
He added that the government will continue providing emergency relief to communities that remain in need of assistance and stressed the need for long-term recovery and reconstruction.
The roundtable was set to present initial findings from post-Nargis joint assessment teams which comprises experts from the ASEAN, the U.N. and Myanmar and the field assessment had been conducted on damage and loss for 30 selected townships -- 11 in the Ayeyawaddy Delta and 19 in Yangon division since June 9.
Meanwhile,atripartite core group involving ASEAN, U.N. and Myanmar has also been working since early this month to make joint assessment on the impact of cyclone Nargis that devastated Myanmarin early May.
The Yangon-based tripartite core group was established at an ASEAN-U.N. international pledging conference held in Yangon in late May asaworking mechanism for coordination, facilitating and monitoring the flow of international assistance into Myanmar's cyclone-hit areas.
Cyclone Nargis hit five divisions and states on May2and 3. It caused the heaviest casualties and massive infrastructure damage.
Myanmar appreciates int'l medics for cyclone healthcare services
www.chinaview.cn 2008-06-24 13:05:56 Print
YANGON, June 24 (Xinhua) -- Myanmar appreciated international medics including those of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) for their participation in the healthcare services for cyclone victims, state media quotedagovernment official on Tuesday.
Myanmar Minister of Health Dr. Kyaw Myint said that their visits for medical purpose have enhanced cooperation between Myanmar and the international medical circle, state media reported Tuesday.
The New Light of Myanmar said such move also promoted understanding between Myanmar and the world nations and in the exchange of knowledge and experiences.
Kyaw Myint, who is also member of the National Disaster Preparedness Central Committee, said this ataworkshop ofaMyanmar-ASEAN-UN tripartite core group on medical missions feedback in post-storm relief, response and early recovery. He said that various domestic healthcare associations, international non-governmental organizations, private clinics and Myanmar traditional medicine practitioners have made field trips to storm-hit areas and carried out treatment for survivors.
In the post-Nargis period, dozens of foreign medics were allowed in Myanmar to render medical services to the cyclone victims. These medics include those from Thailand, India, Laos, China, Bangladesh, Singapore, the Philippines, France, Japan, Indonesia and South Korea.
These groups have respectively served in such disaster-hit townships as Laputta, Myaungmya, Bogalay, Phyapon, Kyauktan, Kungyangon and Maubin. Of them, the Chinese's and the Thai's have completed their missions in Myanmar.
Meanwhile, state media reported no outbreak of other contagious and epidemic diseases in the storm-hit areas, saying thatatotal of 206,039 storm patients had received medical treatment duringamonth after the cyclone storm hit the country early last month.
Deadly tropical cyclone Nargis, which occurred over the Bay of Bengal, hit five divisions and states -- Ayeyawaddy, Yangon, Bago,Mon and Kayin on May2and 3, of which Ayeyawaddy and Yangon inflicted the heaviest casualties and massive infrastructural damage. The storm has killed 77,738 people and left 55,917 missing and 19,359 injured according to official death toll.
(myanmar news)Built to Order: Myanmar’s New Capita...